Xabbad-joojin ay wada gaareen Israel iyo Xamaas oo dhaqan-gashay – Calanka.com
Xabbad-joojin ay wada gaareen Israel iyo Xamaas oo dhaqan-gashay
Israa’iil iyo Falastiiniyiinta ayaa heshiis xabbad joojin ah ka gaaray dagaalki Qaza ka billowday 11-ka May ee uu ka dhashay qasaara naf iyo maalba leh.
Golaha wasiirrada Israa’iil waxay xaqiijiyeen iney heshiis xabbad joojin ay la gaareen maleeshiyaadka Falstiiniyiinta si dagaalka tobanka maalmood socday loo joojiyo.
Cali Barakeh wuxuu sheegay iney ciidanka Xamaas ay feejignaan ku jiri doonaan ilaa ay dhexdhexaadiyeyaashu ay dhammeystiraan faahfaahinta heshiiska xabbad joojinta iyo meel markiisa intaba.
Wararka waxay intaasi ku darayan marki ay Israa’iil xabbad joojinta ku dhawaaqday wax yar un kaddib mulatariga Israa’iil waxay sheegeen in Koonfurta Israa’iil laga maqlayey digniinaha gantaalaha dhanka Qaza laga soo tuuraya.
Warbaahinta Falastiiniyiiintana waxay sheegay iney diyaaradaha Israa’iil duqeyma horleh ka billaabeen marinka Qaza.
Biden wuxuu intaa ku daray Mareykanka oo kaashanaya qaramada Midoobay iney ka go’an tahay sidi gargaar bani aadaminimo loo gaarsiin lahaa Qaza iyo inuu ka qayb qaato dadaallada looga jiro dib u dhiska deegaannadaasi.
Qasaaraha dagaalka ka dhashay
Inta uu dagaalkaasi socday qasaaraha ka dhashay tirakoobka lagu sameeyay waxay lagu ogaaday:
24-kii saac ee la soo dhaafay oo keli ah 11 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa la dilay oo ay 7 ka mid ah yihiin dad rayad ah iyada oo ay dhaawacmeen 190 qof oo kale.
Hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga waxay sheegtay marinka Qaza iney ka qaxeen 91,000 oo qof.
Wasaaradda guriyeynta ee Qaza waxay sheegtay 16,800 oo guri inuu dagalkaasi waxyeello u geystay, 1,800 oo gurina ay noqdeen kuwa aan lagu nolaan karin, 1,000 gurina ay gabi ahaanba burubureen.
Xafiiska warbaahinta Xamaas wuxuu sheegay duqeymaha diyaaradaha Israa’iil iney geysteen qasaara lagu qayaaso $40 malyan oo doolar.
Mulatariga Israa’iilna waxay sheegeen 4,300 oo gantaal in marinka Qaza looga soo riday Israa’iil. 90% gantaalahaasina ay kaga hortageen nidaamka gantaalaha looga hortaga ee Iron Dome.
Ururka waxsoosaarka warshadaha Israa’iil wuxuu sheegay seddexdii maalmood ee dagaalka ugu horreeyey saameynta dhaqaale ee dagaalka uu geystay in lagu qayaaso ilaa iyo $166 malyan oo doolar.